I-Indianapolis Marketing & Business Book Club | Martech Zone
I-Indianapolis Marketing & Business Book Club
NgoMsombuluko, Agasti 14, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla emini ngihlangane nozakwethu abambalwa ukuxoxa Izingxoxo Ezinqunu. Sibe neqembu elimnandi labantu abamele izimboni eziningi: ezomthetho, ezobudlelwano bomphakathi, ithelevishini, ezokuxhumana ngocingo, i-inthanethi, ukumaketha nge-imeyili, ezemidlalo, ezokuzijabulisa, ubuchwepheshe bolwazi, ukumaketha nokushicilela!
Akukubi ngombukiso wokuqala!
Iningi lethu lalifunde ngokugcwele Izingxoxo Ezinqunu, ezinye zaziyingxenye yayo, futhi abambalwa babekusebenzisile empeleni okunye okwakusencwadini. Ozakwethu bangazizwa bekhululekile ukungena ngaphakathi uma bengathanda, kepha nangu umbono wami wesidlo sasemini, impendulo ngencwadi, kanye nokubhuloga kukonke:
Ukubhuloga kungahle kungabi okwazo zonke izinkampani. Uma ungeke ungafihli lutho, ungalimaza inkampani yakho kunokuhle.
Amakhasimende akho azoba nezingxoxo nawe noma ngaphandle kwakho. Kungani ungazami ukulawula ukuqondiswa kwaleyo ngxoxo ngokuba owokuqala ukubloga ngayo? Isithangami somlayezo silinda amaklayenti akho ukuthi abuze. Ibhulogi yithuba lakho lokuphawula ngaphambi kokuba licelwe.
Izinqubomgomo zokubloga azinamsebenzi. Lapho abasebenzi bebhuloga, ukufaka okuthunyelwe okungafanelekile akulimazi kangako kunokukusho nge-imeyili, noma ngocingo, noma engxoxweni. Abasebenzi bayaziphendulela kulokho abakushoyo nganoma iyiphi indlela. Uma uyi-blogger… uma ungabaza, buza! (Isibonelo: Angizange ngicele imvume eqenjini uma ngingabhala amagama abo, izinkampani, imibono, njll. Ngakho angizukuza lapha)
Izinsizakusebenza bezikhathaza futhi ziyisihloko sengxoxo. Sikuphi isikhathi? Lithini isu? Uthini umyalezo?
Kulula ukubhala ngebhulogi, kepha kufanele ufunde ukuthi ungabusebenzisa kanjani ubuchwepheshe obusebenzisa ibhulogi yakho… i-RSS, izixhumanisi, ukulandelela umkhondo, izimpiko, imibono, njll.
Uma ukubhuloga kufakwa njengecebo, yikuphi ukubuya ekutshalweni kwemali? Lokhu kube yingxoxo enempilo. Ngicabanga ukuthi ukuvumelana okujwayelekile ukuthi akusengokukhetha lapho inzuzo ekutshalweni kwemali kufanele ihlolwe khona… kuyisidingo nokulindelwe kumakhasimende akho ukuvula le migqa yokuxhumana. Ngaphandle kwalokho, bazovele baye kwenye indawo!
Uma uyibhizinisi, ukumaketha noma ubuchwepheshe kwezobuchwepheshe esifundeni sase-Indianapolis futhi ungathanda ukujoyina i-Book Club yethu, mane ubhalise ku Ngikhetha i-Indy! bese uhambisa indaba yakho yokuthi kungani ukhethe i-Indianapolis. Sizokufaka ku-imeyili yethu yokusabalalisa enegama lencwadi elandelayo esizoyifunda nokuthi sizoyilandela nini.
Encwadini eseceleni, abakwaShel Israel babenohambo lokwengamela olukhanseliwe futhi luvulekile ukwenza ukubonisana okuthile. Njengoba ebeka, Ngizobheka Imali Yesibambiso. Sibonga ngokukhethekile kuMnu Israel ngencwadi yakhe nangokukhuthaza abantu abambalwa lapha e-Indianapolis ukuthi bangene kuleli thuba thina namakhasimende ethu. Sikweleta okungaphezulu kakhulu kwezindleko zezincwadi!
Sibonga ngokukhethekile kuPat Coyle ngokuphana kwakhe ekuhleleni ukuhlangana kwethu kokuqala kanye neMyra ngokusingatha ikilabhu lethu nokusinikeza isidlo sasemini esimnandi!
PS: Sibonga nendodakazi yami, siphuzile ukubhaliswa ekilasini. Futhi ngibonga umqashi wami, onginciphise kancane ntambama!
Tags: Igobolondo lakwa-Israyeli
Aug 14, 2006 ngo-10: 02 PM
UDoug, kungcono uqaphele iShel Israel yethu ukuthi izokucela izeluleko!
Aug 14, 2006 ngo-11: 53 PM
Siyabonga ngamagama anomusa nange-plug yezandla, uDoug. Kuzwakala njengeklabhu enkulu yencwadi futhi kuyikhathaza kakhulu ukubona amaphuzu amaningi abalulekile encwadi exoxwa futhi esetshenziswa.